Madaxweynaha is-casilay ee FIFA ee farqaha la heysto! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxa Fifa Sepp Blatter ayaa xafiiskiisa u shaqotagay maanta, maalin kaddib markii u ku dhawaaqay in uu xilkaasi ka dagayo. Waxa uu sheegay in uu is casilidoono marka marka la doorto qofka isaga badalaya.
Madaxweynaha FIFA, Sepp Blatter ayaa saraakiisha dalka Mareykanka ay baarayaan sida uu ugu lug lahaa musuqmaasuqa lagu eedeeyay Hay’adda sida ay warbaahinta Mareykanka ku warameen. Warkan ayaa yimid kaddib saacado, markii uu ku dhawaaqay Mr Blatter inuu is casilaayo.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa Isbuucii hore billaabay dembi baaris ay ku sameynayaan 7 xubin oo FIF aka tirsan oo lagu xiray Switzerland. Laba maalin kaddib xarrigaasi, Blatter waxaa loo doortay markel inuu noqdo madaxweynaha FIFA.
Sikastaba, waxa uu sheegay inay u muuqato in guushiisa uusan qofkastoo caalamka ku nool uusan soo dhaweyn. Mr Blatter ayaa hoosta ka xariiqay in “Fifa ay u baahan tahay dib u habeyn qoto dheer.
Xubno sare oo Mareykan ah ayaa wargeyska New York Times u sheegay inay filaayaan in ay wada shaqeyn ka helaan xubnaha saree e FIFA si ay u baaraan musuqa iyo isdabamarinta lacagaha si ay dacwad ugu oogaan Mr Blatter.
Labada aqal ee Somaliland oo ansixiyey gudoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare